Orinasa fiarovana - Ahoana ny fiantraikan'ny fakantsary vatan'ny polisy | Vahaolana OMG
Orinasa mpiambina - Inona no vokany amin'ny fakan-tsarin'ny polisy?
Teo dia nisy ny fotoana nampiasain'ny orinasan-tsarimihetsika ho an'ny daholobe, nefa ny manampahefana manokana sy ny filam-bahoaka dia hita fa mampiasa io teknôlôjia io aza. Betsaka ny sampana mpampihatra lalàna no manomboka mahita ny fakantsary vatana ho fomba fananganana ny fitokisan'ny vondron'olona, ​​manome porofo azo ahamarina ary mitazona tompon'andraikitra ho tompon'andraikitra amin'ny hetsika ataony. Ankehitriny dia sampan'ny polisy no nandray an'izany ary lasa lalàna any amin'ny fanjakana sasany. Amin'ny taona vitsivitsy dia ho azo ekena betsaka izany, be dia be no antenaina sy andrasana.
Betsaka ny orinasan'ny fiarovana tsy miankina hita no nopaka fa tsy ela dia ela, fa maninona? Eny, nisy ny fanamby lehibe indrindra amin'ny lafiny ilaina sy ny vola.
Ny vidin'ny fihazakazahana
Miaraka amin'ny haitao vaovao sy mipoitra, ny vidin'ny fananana mpiasan'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia mihena tsikelikely. Saingy, raha ny zava-misy izany dia tsy misy dikany ny zava-misy, hitantsika fa ny hery ampahibemaso dia afaka manantona mora foana ny vola takiana amin'ny alàlan'ny fanomezana avy amin'ny governemanta sy ny toetra hafa saingy tsy azo atao izany ho an'ny masoivoho manokana. Ary arakaraky ny fantatsika fa ny vidin'ny fitazonana azy ireo dia mihena tsikelikely noho ny taloha lasa lavitra kokoa noho ny vidin'ny fahazoana azy ireo tany am-boalohany. Manjary olana be tokoa izany ary mitondra fanamby marobe indrindra indrindra rehefa tsy maintsy miatrika ny lafiny fikojakojana sy fitehirizana isika.
Rehefa mijery ny tena antony mahatonga ny orinasam-piaramanidina tsy miankina no hitantsika fa toa ny orinasa hafa izay ny tanjona voalohany dia ny fanamboarana tombony hatrany. Rehefa mipetraka ny manampahefana momba ny fiarovana tsy miankina dia manontany tena hoe ohatrinona ny vidin'ny fakantsary vita amin'ny vatan'ny olona, ​​manomboka mieritreritra izy ireo fa tsy hitondra be izany ary azo antoka fa tsy mandoa ny asany (mahasoa).
Takatra tsikelikely fa ny fakan-tsary mifono vatana dia mety ho fitaovana fanazaran-tena tena tsara ahafahana manao biraon'ny filaminana amin'ny asany. Fa alohan'ny hanomezana azy ireo fakantsary hampiasana azy ireo dia tsy maintsy misy fiofanana manokana amin'ity teknolojia ity. Tsy ampy ny hanome izany ho an'ny manamboninahitra iray ary mangataka ny hampiasana azy ireo, tsy maintsy misy ny fahatakarana mialoha sy ny andiany manokana mifototra amin'ny fampiasana azy. Ity dia tafiditra indrindra amin'ny lafiny momba ny fiainana manokana, tena zava-dehibe tokoa ny tsiambaratelo tsy avela. Ny politika momba ny fampiasana (rahoviana no andehanana) dia tena manan-danja na dia mety ho fototra tsy misy dikany aza izany. Zava-dehibe ihany koa ny fampahafantarana ireo olona no voatazona, zava-dehibe ihany koa ny fampianara ireo mpandraharaha momba ny fiarovana ny fomba handratana sy fisintonana ireo angon-drakitra amin'ireo fakantsary. Ireo fiofanana rehetra dia hamatsy vola ary ny orinasa tsy miankina dia tsy mahita hevitra amin'ny fanaovana izany, matetika izy ireo no mahatsapa fa fomba iray handaniany vola amin'ny zavatra tsy dia ilaina loatra. Mety ho ratsy izany, ny orinasa tsy miankina no manome fanazaran-tena sy fampiofanana fototra izay farafaharatsiny manarona ny firenena ary manondro lalàna ho an'ny mpiasany.
Olana amin'ny lalàna
Betsaka ny fitoriana napetraka amin'ireo mpitandro ny filaminana isan-taona, miaraka amin'ny fakantsary fakan-tsary. Mora ny mandamina ny fifanolanana ary miatrika ireo tranga ireo amin'ny alàlan'ny porofo amin'ny horonan-tsary. Ireo mpitandro ny filaminana tsy miankina dia tsy afa-bela amin'ireo fitoriana ireo satria ny toetoetran'ny asany dia tsy mitovy amin'ny an'ny mpiasam-panjakana iray, ka vitsy ny fitoriana napetraka tamin'izy ireo. Hita amin'ny statistika fa matetika ny polisy dia miafara amin'ny fampiasana hery amin'ny ankamaroan'ny fotoana. Raha ny momba ny polisy tsy miankina, ny fikarohana natao dia mbola tsy afaka nampiseho fa mampiasa hery na olona izy ireo. Azo takarina tsara izany aorian'ny fahazoana ny zava-misy fa tsy manao fisamborana isan'andro izy ireo na tsy mila manao famotopotorana toy ny fanaon'ny polisy iray. Ny fandriam-pahalemana manokana dia misy aza ny politika “hands-off” izay manakana azy ireo tsy hikasika olona. Miaraka amin'ny karazana hetsika ataon'ny sekta manokana dia sarotra be ny mamoaka karazana tranga mety hisarika fitoriana na mety fisamborana diso.
Fanafihana amin'ny fiainana manokana
Ny fanasana ny tsiambaratelon'ny olona iray dia midika fotsiny hoe miditra amin'ny zon'ny olona avela ho irery, irery ny orinasan'ny fiarovana ankehitriny dia miahiahy amin'ny fisian'ny porofo avy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana. Mahatsapa ireto orana ireto fa mety hanelingelina amin'ny fiainana manokana ny firaketany ary manitsakitsaka lalàna sasany na aiza na aiza. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia misy ny fahatsapana fa na ny firaketana an-tsoratra irery aza dia mety hampidi-doza ho an'ity raharaha ity, raha ny tokony ho izy dia tokony ho natao hanalefaka fotsiny izany na hanaporofo ny tsy fanamelohana. Satria ny fampiharana ny lalàna izao dia mahita fahazoan-dàlana ho porofo afaka manidy tranga iray ary porofo na iza na iza na iza na iza na iza hangataka haingana nefa mihena ny vidiny.
Ireo tompon-trano matanjaka kosa dia mahalala fa tsy manome fiofanana ampy izy ireo, noho izany dia tsy hahagaga raha misy ny olana, indrindra fa rehefa fantatr'izy ireo fa voafetra ny fahaiza-manao sy ny fahaizany, ireo olona ireo dia manomboka matahotra ny zava-misy fa misy tsirambina na diso Azo jerena ary voaporofo ny fihetsika na dia amin'ny porofon'ny lahatsary aza. Iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ny fampiasana fakantsary maotina misy vatana izy io voaofana tsara sy manao fihetsika mety, ireo teny manan-danja ireo. Na izany aza, efa fantatry ny mpitantana ny filaminana fa tsy dia mandeha tsara ny mpiambina azy ireo satria tsy mbola nampiofana tsara azy ireo izany. Matetika dia lasa olan-javatra tena manahirana izy ireo, mangataka ny mpiambina azy izy ireo hijery sy hitatitra fa tsy manao hetsika fanoherana ny herisetra, tezitra, tsy afa-po na avo lenta amin'ny zava-mahadomelina olona. Ny sasany aza dia lasa lavitra amin'ny filazalazana ny biraom-panjakan'izy ireo ny handriny na hiantso 911 rehefa tsy voafehy intsony ny toe-javatra iray.
Ny fahazoana izay ilaina hatao
Tena ilaina ny mahatakatra ny fampiasana fakantsary vatana, izany dia ny fisorohana ny tsy hanakorontana amin'ny vahoaka. Ny andraikitry ny sampandraharaha fiarovana dia ny manompo, ny serivisy dia mety ho an'ny besinimaro na izay manakarama azy ireo. Fa imbetsaka, noho ny karazana asa fiarovana dia nomena toy ny mpiambina, serivisy mpanjifa na fanakorontanana ara-maso. Matetika no tsy mila mameno azy ireo amin'ny fakantsary manana vatana.
Orinasa mpiambina - Inona no vokany amin'ny fakan-tsarin'ny polisy? no farany niova: Oktobra 10th, 2019 by Admin
4082 Total Views 3 Views Today